PlayStation5ဒီဇိုင်း မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Sony
PlayStation5ဒီဇိုင်းနဲ့ Accessories ၊ Games တွေ ကြေညာပေးလိုက်တဲ့ Sony
လူတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ ပြောနေကြတယ် “Futuristic ဖြစ်တဲ့ Console Design” တဲ့ ၊ အဖြူနဲ့ နက်ပြာရောင် နှစ်မျိုး စပ်ထားတဲ့ PlayStation5ဟာ ကျွန်တော်တို့တတွေ နှစ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ Star Wars ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက X-Wing Fighter တောင်ပံ ခေါက်ထားတဲ့ ပုံလိုလို ၊ Star Destroyers နှစ်စင်း ကပ်ထားသလိုလို ပုံဖမ်းထားတယ်။
Just Imagination (Image: Flickr)
တချို့ မြင်တာက Alienware Area 51 နဲ့ X51 Desktop နှစ်ခုကို မျိုးစပ်ထားတယ် ထင်ကြသလို လတ်တလော Twitter မှာ ပလူပျံနေတာ Console သစ် ဒီဇိုင်းပါ။
Personally, သဘောကျမိတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးဖြစ်တာထက် “ဟင်!” အာမေဋိတ် အသံနဲ့ “ဘာဒီဇိုင်းကြီးလဲလို့” မေးခွန်း ထုတ်မိပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမြင်မတူကြတဲ့အတွက် စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်လိုမြင်လဲ?
အလျားလိုက်ဖြစ်စေ ၊ ဒေါင်လိုက်ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Versatile ဒီဇိုင်းဟာ မဆိုးပါဘူး။
Along with Exclusive Games
PlayStation4ဂိမ်း အမျိုးစားပေါင်း ၄,၀၀၀ ကျော် ထောက်ပံ့ထားမယ့် Console အသစ်ဟာ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ မိတ်ဆက်ပွဲမှာ အလန်းစား ဗီဒီယိုဂိမ်း ၂၄ မျိုးကိုပါ ၁ နာရီနီးပါး ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေ အပျင်းပြေ ကြည့်ရှုရအောင် မိနစ် ၃၀ စာ ကျုံ့ထားတဲ့ Announcement Trailer ကိုလည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အများစုက Exclusive ဖြစ်သလို တကယ်လို့ PS5 ကြီး လက်ထဲရောက်လာရင် ဘာဂိမ်း အရင်ကစားဖြစ်မလဲ? အကုန်လုံးနီးပါး ကောင်းနေတာဆိုတော့ ရွေးရခက် ဖြစ်နေမယ် ထင်ပါတယ်။
Sony အနေနဲ့ PlayStation5ကို Version နှစ်မျိုး မိတ်ဆက်ထားပြီး 4K BluRay Disc Player ပါဝင်တဲ့ မော်ဒယ်နဲ့ Disc Player မပါဝင်တဲ့ Digital Edition တို့တတွေပါ။ Disc Player မပါဝင်တဲ့အလုံးက $100 သို့ ပိုသက်သာနိုင်ပြီး Design Look & Feel လေးကိုပါ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မြင်ရတဲ့အတိုင်း Digital Version က ပါးလွာမှု ရှိသလို Slim Design နဲ့ ပို Sexy ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Console နဲ့အတူ ပါဝင်လာမှာက Wireless DualShock Controller အသစ်ဖြစ်ပြီး စာဖတ်သူတွေ မြင်ဖူးပြီးသား ဒီဇိုင်းပါပဲ။
Console နဲ့ လိုက်ဖက်စွာ အဖြူ ၊ နက်ပြာရောင် နှစ်မျိုးစပ်ထားပြီး PlayStation5ကို အနီးကပ် သေချာကြည့်ရင် Ventilation Grills ပဥ္စဂံပုံစံ လေထွက်ပေါက်တွေ မြင်တွေ့နိုင်ပြီး USB-A နဲ့ USB-C Port နှစ်ခု ပါဝင်တာ တွေ့ရမှာပါ။
with More Accessories
ကိုယ်ထည် အတွင်းဖက်မှာ Sony စာသား ဖော်ကျူးထားပြီး အဆိုပါ Controller နဲ့အတူ DualSense Charging Station (Controller နှစ်ခု တပြိုင်နက် အားသွင်းနိုင်) ၊ HD Camera အသစ် ၊ Pulse 3D Wireless Headset နဲ့ Media Remote အစရှိတဲ့ Accessories တွေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Controller မှအပ ဒီ Accessories တွေကို သီးသန့်ဝယ်ယူရမယ့် အနေထားရှိပြီး လက်ရှိချိန်ထိ ရောင်းချမယ့် စျေးနှုန်း မကြေညာသေးသလို PS5 နဲ့ တပြိုင်နက် ထွက်ရှိ ဝယ်ယူနိုင်မလား မသိရသေးပါဘူး။
Hardware ပိုင်း အကျဥ်းပြောရရင် PlayStation5မှာ Zen2Architecture အသုံးပြုထားတဲ့ 8-cores AMD CPU ၊ 10.28 Teraflops နဲ့ ညီမျှတဲ့ Radeon GPU ၊ 5.5GB/s မြန်နှုန်းရှိ 825GB SSD တို့ အသုံးပြုထားပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တစ်ခါ ဖော်ပြဖူးတဲ့ PlayStation5နဲ့ Xbox Series X တို့ ဘယ်သူပိုစွာမလဲ ဆောင်းပါး Link မှာ အသေးစိတ် ကြည့်ရှု မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
ဒိမိတ်ဆက်ပွဲ မတိုင်ခင် Unreal Engine5ကို PS5 နဲ့ Run ထားတဲ့ Demo ကို မှတ်မိဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ Demo Trailer မှာ Cinematic Quality ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Graphics ကို ပြသခဲ့ပြီး Dynamic Lighting Effects နဲ့အတူ PS5 လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
Reveal Trailer မှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ အလားတူနီးပါး ကောင်းမွန်တဲ့ Graphics Quality ကြောင့် တအံတအား ဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ စာဖတ်သူတွေကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုတာ UE5 မှာ အဓိက အစိတ်ပိုင်း ၂ ခု ပါဝင်ပါတယ်။
Nanite နဲ့ Lumen အသုံးနှုန်းဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိမ်းနေပေမယ့် Nanite ဆိုတာ CGI (Computer Generated Graphics) မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Engine တစ်ခုပါ။ Micro-polygon Renderer လို့ နောက်တမျိုး ခေါ်တွင်ပြီး ဂိမ်းနဲ့ ရုပ်ရှင် ကွဲပြားသွားတဲ့အချက်က ဂိမ်းမော်ဒယ်တစ်ခုမှာ သန်းနဲ့ချီ ၊ ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ Polygons တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Nanite ကတော့ Dynamic Lighting Effect နဲ့ High Quality မော်ဒယ်တစ်ခုကို Resolution Scale-up (သို့) Scale-down လုပ်တဲ့အခါ Geometric Detail ကို တာဝန်ယူထားတာပါ။
Sony ရဲ့ အသစ်စက်စက် PlayStation5ဟာ 8K Graphics ထောက်ပံ့ထားပြီး 4K Graphics မှာ 120Hz Refresh Rate နဲ့အတူ 3D Audio လည်း ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုလဲ လိုချင်နေပြီလား? Attractive ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ရောင်းချမယ့် စျေးနှုန်းကို တရားဝင် ကြေညာထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။